I-Xiaomi Black Shark 2 Pro: iimpawu zobugcisa ezivuzayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IXiaomi Black Shark 2 Pro ibonisa umsipha kwezinye iibenchmarks
Iifowuni zemidlalo ziya zisiba yimfashini. Abavelisi abangakumbi nangakumbi babhejela kolu hlobo lwesisombululo, ii-smartphones zokudlala eziza kusivumela ukuba sihambise ezona zihloko zisemgangathweni ngaphandle kwengxaki. Kwaye enye yezona zinto zibalaseleyo zokukhupha iXiaomi kunye noluhlu lwayo lweShark emnyama. Kutshanje sikubonise umbono wethu emva hlalutya iBlack Shark 2. Kwaye kujongeka ngathi imodeli yePro iyeza.
Ayisiyo okokuqala seva ngale modeli, kwaye ngoku zimbalwa I-Xiaomi Black Shark 2 Pro iibhentshi oko kusothuse ngokwenene. Kubonakala ngathi ifemi ifuna ukusothusa ngefowuni yayo entsha yokudlala, kwaye inkwenkwe iyakwenza oko!
Ezi ziya kuba ziimpawu zobuchwephesha zeXiaomi Black Shark 2 Pro
Njengoko ubona kumfanekiso ophethe le migca, bekudlula ngeGeekBench apho siye sakwazi ukubona inxenye yeempawu zobuchwephesha zesiphelo, apho sifumene izinto ezimbini ezinomdla kakhulu. Kwelinye icala, sinenyani yokuba iXiaomi Black Shark 2 Pro izakufika nge-12 GB ye-RAM.
Le yinyani ekufuneka ithathelwe ingqalelo, nangona ingamangalisi ngokugqithileyo. Ewe yi-asshole ye-RAM, kodwa bekulindelwe ukuba ifowuni yokudlala yolu hlobo inesi sixa sikhulu. Kodwa, ukumangaliswa okukhulu kukuprosesa yayo. Kwaye inyani kukuba iXiaomi Black Shark 2 Pro iya kubetha ibonge iSoC Snapdragon 855+, inguqulelo enevithamini yegugu kwisithsaba somenzi waseMelika, ekuya kuthi ukusebenza kwayo kule smartphone intsha kudlale .
Lumka, amarhe acebisa ukuba Xiaomi Black Shark 2 Pro umhla wokukhutshwa Iya kusondela kakhulu kunokuba besicinga: inokuboniswa nge-30 kaJulayi ezayo. Ixabiso layo? Imfihlakalo, kodwa eyona nto isengqiqweni kukuba ayizidluli i-euro ezingama-800.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Black Shark 2 Pro ibonisa umsipha kwezinye iibenchmarks
Unokuba noMncedisi kaGoogle njani kwi-smartwatch yakho ye-Samsung Galaxy kunye ne-GAssist
IHuawei itshintsha ingqondo: iya kuqhubeka nokubheja kwi-Android